Kungani wesabe cholecystitis neso elibukhali kangaka?
A yezizathu ezihlukahlukene kungabangela cholecystitis (ukuvuvukala gallbladder), ngokuvamile isifo, isifo gallstone noma isifo yisinanakazana. Le nkinga isakazeke kabanzi, okwenzeka emaqenjini abo bonke ubudala futhi ubulili, nakuba ngokuvamile ngaphezulu abesifazane abadla eziningi futhi ngokuvamile. Futhi wenza cholecystitis acute cholestasis mechanical, kuhlanganise namaphutha ibangelwa ukudla kanye notshwala. Phakathi ukwephula Ukudla condusive kakhulu isifo - inhlanganisela izinkathi ezinde indlala nge ukudla. Nokufaka isandla ekuthuthukiseni ukuvuvukala kanye nezinto ezifana ukungawuvivinyi umzimba, ukukhulelwa kanye nezifo ezingamahlala khona yokusetshenziswa pheshana emathunjini (yokudleka kolwelwesi lwesisu, pancreatitis). outflow ka Bile ukwephulwa zokugula kwemisipha zesivikelo sesifuba (kokubili esinyeni futhi ipheshana biliary) ukudala izimo ezikahle ze "ukunyukela" amagciwane emathunjini kanye nokuthuthukiswa ukuvuvukala webhaktheriya, kanye kumiswa amatshe (okuyinto yena, ngemuva kwesikhathi esithile, futhi, kungabangela ukuvuvukala ezinzima). Isithombe cholecystitis okucindezelayo kungase kube kuhle ngenxa yokubakhona ezidala - Giardia. Lesi sifo (giardiasis) yande kakhulu phakathi izingane.
Izimpawu kanye izimpawu
Uma athuthukile cholecystitis acute, umtholampilo kuyoba okufanayo, kungakhathaliseki ukuthi iyini imbangela. Kungazelelwe kukhona acute ezinzima ubuhlungu ngakwesokudla quadrant engenhla, ngezinye izikhathi akhanye (ithumela) kuya emuva isiphanga (ngokuvamile ohlangothini lwesokudla). izimpawu ejwayelekile: imfiva (ngezinye izikhathi izinga lokushisa likhuphuka kuze izinombolo kahle eliphezulu), ikhanda, ukujuluka, isicanucanu kuze ukuhlanza futhi ngezinye izikhathi sohudo. Ngo mechanical ukuhlukunyezwa Bile outflow (kuvamise ukuba ngenxa ukuvaleka biliary ipheshana amatshe) angagcina jaundice. Imisipha esiswini engenhla ngokuvamile tensed, rapping ngaphansi lwaleli costal futhi umunwe wakho endaweni empambana we rectus abdominis imisipha kuyokunikeza eziningi ubuhlungu. Nokho, ukuze uthole izimpawu wezokwelapha bazibandakanye isheke Akubalulekile zidinga imfundo ekhethekile ukuze kutholwe yabo olunembile.
Ubungozi cholecystitis acute kuyinto yezinkinga zayo. Isimo nge ingozi lasetulu kakhulu ukwakha pancreatitis yesibili. Nokho, ngokuvamile kunzima ukuqonda ukuvuvukala ngokulandelana, futhi akudingeki ngempela. Uma izimpawu zokudakwa zimbi, nobuhlungu herpes atholwe uhlamvu, kusho ukuthi kukhona ukuvuvukala kwamanyikwe. Okuwukuphela isinyathelo esifanele - biza ambulensi, ngoba pancreatitis - kulesi simo, ngempela, okuyisimo esisongela ukuphila. Owesibili inkinga eyingozi kakhulu kulolu perforation, isb ukudabuka odongeni gallbladder. Kufanele I ukuchaza ukuthi ngenkathi kuthululwa Bile ngqo ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu ngokushesha okubangela ukuvuvukala yayo - peritonitis!
Usizo cholecystitis acute kufanele kunethonya udokotela. Ekhaya, udinga ukuba bangayeki ukudla, embhedeni ukuphumula futhi ushayele onguchwepheshe. Azikho izenzo okwengeziwe akufanele kwenziwe. Uma ukuhlasela ahlekise wasuka ku ngemuva ukuvuvukala okungamahlalakhona, ungazama ukuyeka kakwaziwe yini imithi (antispasmodics, Bile izindlela), kodwa kulokhu kungcono uye kudokotela uyofuna icebiso. ukwelashwa yakhiwa analgesia cholecystitis acute izidakamizwa spasmolytic (ukuthi kanyekanye ngcono ukugeleza Bile), ngokukhishwa kobuthi egazini kanye ukumnika emthanjeni, elwa ne-virus. Nge ukukhushulwa naphezu ekwelapheni izimpawu zokudakwa noma yokuba nezinkinga lokuhlinzwa wenziwa. Uma kungekho peritonitis, kungaba enze ephansi nomthelela besebenzisa amasu endoscopic.
Igazi test. Igazi ekunqandeni. Kulungiswa yegazi: coagulation
Hemorrhoids: ukwelashwa laser. Emihle nemibi indlela
Anasarca: ukuthi kuyini, kubangela, izimpawu kanye nokwelashwa
Kanye esingayenza ngaphandle kokuthi siphathe izwi olahlekile - laryngitis?
Kungani ingcindezi liphuma: izizathu. Izimpawu yokucindezeleka okwandayo
Baking Perfect: uwoyela ikhekhe recipe
Impi Syria akagcini
Uyini idling valve
Hlangana Abazali: test amandla
Uboya izinwele ngamakhambi: izimfihlo zekhanda elihle
Abantu Engalungile Ngalesi Sithombe? Imihlobo ehlukeneko Ubumnene
Eqhubekela phambili uhambo, lapho Petersburg nobusuku obungamashumi mhlophe
Zonke onobuhle "Nissan": umlando sha